Mystic River(2003) | MM Movie Store
ဒီဇာတျကားကတော့ စာအုပျလဲထှကျထားပါတယျ …..ဇာတျလမျးကလညျး ၂နာရီလောကျကွာပါတယျ …..တျောတျောမြားမြားရုပျရှငျတှကေ စာအုပျကိုမမှီဖူးလို့ဝဖေနျခံရလရှေိ့ပါတယျ ….
ဒါပမေယျ့ဒီရုပျရှငျကတော့ စာအုပျဖတျဖူးသူတိုငျးက ရုပျရှငျကပိုကောငျးတယျ ပိုပွီးခံစားရတယျ ….
သာမနျ Thriller ရုပျရှငျတှထေကျကိုသာလှနျတယျလို့ review ကောငျးတှရေထားတဲ့ဇာတျကားပါ…Thriller fan တှတေကယျကိုလကျမလှတျသငျ့တဲ့ဇာတျကားပါပဲ..ထောငျထှကျ Jimmy ရဲ့သမီးလေး အသတျခံရတော့ သူ့ရဲ့ငယျသူငယျခငျြး၂ယောကျပါဒီကိစ်စထဲပါလာတယျ…
တဈယောကျက Daveက သာမနျအလုပျသမား ဒါပမေယျ့အတိတျဆိုးနဲ့လူ ….သူက Jimmy သမီးကိုမသခေငျနောကျဆုံးတှခေဲ့တဲ့လူဖွဈနတေယျ..နောကျတဈယောကျက Sean လူသတျမှုတှရေဲ့စုံထောကျပေါ့ သူကဒီအမှုကိုတာဝနျယူထားရတဲ့လူ…သူငယျခငျြး၃ယောကျပွနျဆုံဖွဈကွတယျပေါ့ …
တဖွညျးဖွညျးနဲ့ အမှုနဲ့ပတျသကျလို့သိလာရတာတှရှေိလာတော့ Jimmy က Dave ကိုသံသယဝငျလာတယျ…ဘယျလိုဖွရှေငျးကွတယျ သူငယျခငျြး၃ယောကျရဲ့ဇာတျလမျးကဘယျလိုလဲဆိုတာတော့ ဆကျကွညျ့ကွဖို့ပဲတိုကျတှနျးခငျြပါတယျ…
ဒါရိုကျတာ Clint Eastwood ရိုကျကူးထားတာဖွဈပွီး နာမညျကြျောမငျးသားကွီးတှဖွေဈတဲ့Sean Penn,Tim Robbins, Kevin Bacon တို့ပါဝငျသရုပျဆောငျထားပါတယျ…
ဒီဇာတ်ကားကတော့ စာအုပ်လဲထွက်ထားပါတယ် …..ဇာတ်လမ်းကလည်း ၂နာရီလောက်ကြာပါတယ် …..တော်တော်များများရုပ်ရှင်တွေက စာအုပ်ကိုမမှီဖူးလို့ဝေဖန်ခံရလေ့ရှိပါတယ် ….
ဒါပေမယ့်ဒီရုပ်ရှင်ကတော့ စာအုပ်ဖတ်ဖူးသူတိုင်းက ရုပ်ရှင်ကပိုကောင်းတယ် ပိုပြီးခံစားရတယ် ….
သာမန် Thriller ရုပ်ရှင်တွေထက်ကိုသာလွန်တယ်လို့ review ကောင်းတွေရထားတဲ့ဇာတ်ကားပါ…Thriller fan တွေတကယ်ကိုလက်မလွတ်သင့်တဲ့ဇာတ်ကားပါပဲ..ထောင်ထွက် Jimmy ရဲ့သမီးလေး အသတ်ခံရတော့ သူ့ရဲ့ငယ်သူငယ်ချင်း၂ယောက်ပါဒီကိစ္စထဲပါလာတယ်…
တစ်ယောက်က Daveက သာမန်အလုပ်သမား ဒါပေမယ့်အတိတ်ဆိုးနဲ့လူ ….သူက Jimmy သမီးကိုမသေခင်နောက်ဆုံးတွေ့ခဲ့တဲ့လူဖြစ်နေတယ်..နောက်တစ်ယောက်က Sean လူသတ်မှုတွေရဲ့စုံထောက်ပေါ့ သူကဒီအမှုကိုတာဝန်ယူထားရတဲ့လူ…သူငယ်ချင်း၃ယောက်ပြန်ဆုံဖြစ်ကြတယ်ပေါ့ …
တဖြည်းဖြည်းနဲ့ အမှုနဲ့ပတ်သက်လို့သိလာရတာတွေရှိလာတော့ Jimmy က Dave ကိုသံသယဝင်လာတယ်…ဘယ်လိုဖြေရှင်းကြတယ် သူငယ်ချင်း၃ယောက်ရဲ့ဇာတ်လမ်းကဘယ်လိုလဲဆိုတာတော့ ဆက်ကြည့်ကြဖို့ပဲတိုက်တွန်းချင်ပါတယ်…
ဒါရိုက်တာ Clint Eastwood ရိုက်ကူးထားတာဖြစ်ပြီး နာမည်ကျော်မင်းသားကြီးတွေဖြစ်တဲ့Sean Penn,Tim Robbins, Kevin Bacon တို့ပါဝင်သရုပ်ဆောင်ထားပါတယ်…